नाकले टाइप गरेर दुईवटा विश्व रेकर्ड !
सोमबार १० माघ, २०७३
काठमाडौ । केही व्यक्तिका क्षमता र साहस जो कोहीले पत्याउन नसक्ने हुन्छन् । हातले वा खुट्टाले समेत टाइप गर्न हम्मेहम्मे पर्नेहरुका लागि यो सामाग्रीको शीर्षक त्यस्तै अपत्यारिलो लागेको हुनुपर्छ । किनकी कम्प्युटरको कि बोर्डमा तिव्र गतिमा हात दौडाएर निकै छिटो छिटो टाइप गर्ने कतिपय मानिसहरुको गति देख्दा त हामी अचम्ममा पर्छौँ । हातले टाइप गर्दा त अचम्ममा परिन्छ भने यदि कसैले हातको साटो नाकले टाइप गरेको देखियो भने कति अचम्म होला ?
भारतको हैदरावादका एक युवकले आफ्नो नाकले नै तिव्र गतिमा कम्प्युटर टाइप गरी सबैलाई तिनछक त पारेकै छन, आफ्नो नाममा दुई वटा वल्र्ड रेकर्ड समेत कायम गरेका छन् । उनले आफ्नो नाकले यति तिव्र गतिमा टाइप गर्छन् की धेरै मानिसले त्यति बेजोडसँग त हातले पनि टाइप गर्न सक्दैनन् । इन्जिनियरिंगका विद्यार्थी रहेका मोहम्मद खुर्सीदले १० वर्षको हुँदादेखि नै टाइपिंग सिक्न सुरु गरेका थिए । नाकले टाइप गर्ने कलामा पोख्त हुनका लागि उनले दिनमा ८ घण्टासम्म टाइप गर्दथे ।
उनले पौने चार सेकेण्डमा औँलाले पूरै अल्फाबेट टाइप गरेर सन् २०१२ मा विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए । त्यस्तै ४७ सेकेण्डमा नाकले १ सय ३ वटा शव्द टाइप गरी सन् २०१४ मा उनले अर्को अद्भुत रेकर्ड कायम गरे । नाकले टाइप गर्ने बेला उनले विभिन्न समस्यासँग पनि जुध्नुपर्छ । नाक किबोर्डमा धसेर टाइप गरिरहँदा कि बोर्ड आँखाले हेर्न निकै सकस पर्दछ ।
कामचोर्न काममा नजान आफ्नै अ’पहर’णको नाटक गरे, खुलेपछि जागिर नी चैट जेलको वास
उडिरहेको विमानमा अचानक आगलागी भएपछि (भिडियोसहित)
यो तस्विर किन हुँदैछ भाइरल ?
२५ दिनदेखि तेलाङ्गनाको एक जेलमा कुखुरा थुनिए
एक भ्यागुताको मुल्य २ लाख ३२ हजार, यति महंगो हुनुको कारण पत्ता लाग्दा दुनियाँ चकित !
आकाशमा देखियो अत्यन्तै डरलाग्दो दृश्य